Xildhibaan: Farmaajo wuxuu u xuubsiibtay kaligii taliye | KEYDMEDIA ONLINE
Xildhibaan: Farmaajo wuxuu u xuubsiibtay kaligii taliye
Shacabkii doorashadiisii u banaanbaxay ayuu Maanta qoriga caaradiisa u adeegsanayaan inuu ku caburiyo oo dhiigooda u daadiyo kursiga.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur, oo katirsan Gollaha Shacaba ayaa sheegay in Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu waqtiga ka dhamaadey uu u xuubsiibtay kaligii taliye dhiigga shacabka daadinaya.
"Dadka shacabka ah ee shalay ay ciidamada Boolisku ku dileen Muqdisho waxaa ay cadayn u tahay in Madaxweynaha waqtigiisu sii idlaanayo ⁦u xuubsiibtay kaligii talis (dictator)," ayuu yiri Xildhibaan C/llaahi.
Waxuu Xildhibaanka xasuusiyay Farmaajo in aan marna shacabka Soomaaliyeed lagu caburin karin Ciidan iyo qori, oo ay sii wadi doonaan kacdoonka ay uga soo horjeedaan boobka doorashadda iyo dagaal hurinta uu wado Madaxweynaha.
Farmaajo ayaa wajahaya eedeymo iyo cadaadis xooggan oo mucaaradka iyo shacabka uga imaanaya kadib markii uu diiday inuu qabto doorasho xor iyo xalaal ah, oo loo wada dhan yahay taasoo ku dhacda waqtigeeda.
Dad shacab ah oo si nabad ah ku banaanaxayay ayay Ciidanka DF ku laayeen shalay waqooyiga Muqdisho, waxaana la xiray dhowr qof oo guryahooda loogu galay, iyadoo taasi caddeynayso kaligii-talisnimada lagu eedeeyay Farmaajo.